Why are email, Internet and mobile technologies important in Zimbabwe? Zimbabweans live in a repressive media environment. All radio and television is controlled by Zanu PF/Mugabe. [Zanu PF is the governing party, led by Robert Mugabe, the President of Zimbabwe.] Only recently has an independent daily newspaper been allowed to operate.
February 17, 2014, 9:25 am	Really informative information about Zimbabwe, normally its quite difficult to find information on Zimbabwe these days, but Thanks to National Geographic for giving us the great information.
November 8, 2011, 5:37 am	like to be a member and receive news updates daily